संसदमा जुँगाको जुहारी, सिमाक्षेत्रमा विप्लवको काँडेतार « Postpati – News For All
संसदमा जुँगाको जुहारी, सिमाक्षेत्रमा विप्लवको काँडेतार
कुलेन्द्र सरगम । देश बनाउने जिम्मा लिएकाहरु संसद भवनमा भागबण्डाको जुहारी चलाई रहेका छन् । संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेर जुँगाको लडाई चलिरहदा यता बिर्दोही पक्ष भनिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने ‘सिमाक्षेत्रमा काँडेतार लगाउँ, सिमा बचाउँ’ अभियान चलाई रहेको छ ।
अर्थात काठमाडौंको देशमा आपसमा जुँगाको लडाई हुँदै छ, यता सिमानामा विप्लवले मोदीसंग लड्न उद्घोष गरिसके ।
झन्डै दुइतिहाइ बहुमत पाएको सरकारले शान्ति सुशासनको खोक्रो सपना बाँडी रह्यो तर सिमाका नागरिकहरु असुरक्षा महसुस गर्दै रातमा पनि जाग्राम बसिरहे, अझै बसिरहेका छन् ।
उनीहरु चौबीसै घण्टा असुरक्षित महसुस गर्दै बाँचिरहेको जीवन बारे काठमाडौंको सरकार बुझ्न सम्म चाहादैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कम्युनिष्ट सरकार रहेको बकवास गरेर, राजधानीमा चिल्लो कारमा चढेर संसद भवनमा समय खेर फालिरहेको छ । छिमेकी भारतले देशको सिमा मिच्दा नक्सा समेत भत्किएको अबस्था देखेर पनि नदेखेझै गरि लाजपचाएर बसिरहेको छ ।
जनताको करमा मस्ती गर्नेहरु सिमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउने चेष्टा समेत गर्दैनन् । देश र जनताका लागि बिडम्बना यहि छ । त्यसैले त भन्नेहरु भन्दा हुन ‘देशको काट्टो खानेहरु’!
देशलाई अस्थिर बनाउन तल्लिन सत्तासिन र प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस लगाएतका ठुला पार्टीहरु दलिए भागबण्डामा जुहारी खेलिरह्दा यता एकीकृत क्रान्तिको बाटो रोजेको नेकपाले भने सिमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउने स्रहानिय अभियान थालेको छ ।
खासगरि यो पंतिकार क्रान्तिको नाममा काटमार जस्ता राजनीति देखि निकै एलर्जी हुन्छ । यस्ता कार्यहरुले देशलाई बर्बादी मात्रै बनाउछ । १० बर्षे जनयुद्दले देशलाई बर्षौ पछाडी धकेलेको सत्य हो । विप्लवले एकीकृत क्रान्तिको जसरि सुरुवार गरेका छन्, त्यसरी नै मलाई पनि त्रसित बनाएको छ ।
कतै देश फेरी गृहयुद्दमा फस्ने त होइन ? सायद यो प्रश्न धेरैको मनमा छ ।
विप्लवले सत्तासिनहरुलाई लगाउने गरेको एउटा आरोप हो, ‘दलाल संसदीय राज्य ब्यबस्था’ । यहि व्यवस्थाका कारण एकीकृत क्रान्ति अनिवार्य छ, भन्ने उनको तर्क छ ।
क्रान्ति हुन्छ वा हुँदैन, त्यो बिषय बस्तु परिवेशले निर्धारण गर्ला तर विप्लवले लगाएको ‘दलाल संसदीय राज्य ब्यबस्था हो’ भन्ने उनको जिकिरमा सत्यता छ ।
विप्लवको भनाई सत्य हो भन्ने प्रमाणका लागि हाम्रा सीमाहरु बोलिरहेका छन् । सिमा क्षेत्रमा भारतीयहरुको हेपाई र मिचाई भोगिरहेका नागरिकहरुको कस्टकर जिबनले दर्शाई रहेका छन ।
तिनै सिमाबासीहरु हुन् गतिलो प्रमाण ।
आफ्नो देशको सिमा मिचिदा समेत काठमाडौं भन्ने देशको सरकार केहि बोल्दैन । सिमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाई देउ भन्दा सुन्दैन । हाम्रो भुमि मिचियो न्याय देउ भन्दा दिंदैनन ।
भनेपछि अब यो देश चलाउने संसदीय ब्यबस्था र त्यस अन्तर्गतका नेताहरु भारतीय दलाल होइनन ?
काठमाडौंको ब्यबस्था दिल्लीको इशारामा चल्ने भएको हुँदा, हाम्रा सिमाहरु मिचिदा पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् खोक्रो राष्ट्रबाद भट्याएर देशको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली ।
सिमाबासीलाई भारतिहरुले मिचाई र हेपाई भोगिरह्दा न्याय दिने आँट छैन खोक्रो कम्युनिष्टको खोल ओढेका प्रचण्डलाई ।
कांग्रेसीहरुको बारे कुरा गरेर कुरेको दुख मात्रै हो । यो देशमा सबै भन्दा ठुलो भारतीय दलाल हो भने त्यो हो नेपाली कांग्रेस । काँग्रेस सत्तामा हुँदा देशको राजनीतिक बिचौलिया बनेर बनाएको पुरानो संसदीय संयन्त्र तथा ब्यबस्था हो ।
जुन ब्यबस्था भत्काउन मदन भण्डारी देखि प्रचण्ड दाहाल सम्म राजनीतिक अभियानमा लागेका थिए । मदन भण्डारी मरेर गए, बेलैमा कसैले मारिदिंदा यो व्यबस्थाको दोष उनले बोक्नु परेन । भलै केपी वली दाहिने हुँदा अहिले श्रीमती विद्या देबी भण्डारीले बोकिरहनु परेको छ ।
राष्ट्रियता बारे केपी ओलीको कुरा नगरौ, सुकेको दिशा कोट्याउन हुँदैन । १७ हजार सहिदको रगत बगाएर यहि व्यबस्थाको बिरुद्द लड्ने लडाउने प्रचण्ड नै आलोकाचै उही पुरानो व्यबस्थाको मालिक भए । आखिरमा लेख्दा नयाँ ब्यबस्था भने पनि सारमा उही पुरानो ब्यबस्था कायम रह्यो ।
अब दाहालसंग नैतिकता हराएको उत्तर बाहेक अरु केहि बाँकी छैन ।
देशको स्वाभिमानका लागि विप्लवको सम्मानित कार्य
आजको दिन सम्म विप्लवलाई स्याबासी दिनै पर्छ । कमसेकम उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि भारत संग लड्ने हिम्मत राखेका छन् र आज सिमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउदै छन् । भोलि धोका दिने हुन भने त्यो उनैले जान्ने कुरा हो ।
छिमेकी देश भारतले नेपालको सिमानामा हस्तक्षेपलाइ रोक्न नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सिमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउँ सिमा बचाउँ अभियानलाई कदर गर्नै पर्छ।
नेकपाको केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा अखिल (क्रान्तिकारी)ले चितवनको माडी नगरपालिका ५ मा रहेको सोमेश्वरगढी नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाएर सिमा बचाउँ अभियानको सुरुवात गर्यो ।
भारततिर मात्र नभएर, अखिल क्रान्तिकारीले चिनियाँ सीमाक्षेत्रमा पनि काँडेतार लगाईने जनाएको छ ।
लाज पचाएका नेताहरु संसदमा मारमुंग्री
लाज पचाएर संसदमा रोइलो गरिरहने काँग्रेसले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेलेरै पास गर्न लागको भन्दै मंगलबारको संसद अवरुद्ध गर्दै संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्न व्यस्त देखिन्छ । दलाली चिन्तनको नाभीबाट जन्मिएको कालो काँग्रेसले दलाल सरकारलाई घुर्की लाएर देशलाई अस्थिर बनाउदै छन् ।
कांग्रेस नेताको नाममा रहेका अस्पतालका नाम हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा घम्साघम्सी भयो । यो बिषय खास जनसरोकारको बिषय नै होइन, केवल व्यावसायिक मुनाफाको बिषय मात्र हो ।
आफ्ना नेताको नाम रहेको अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नल्याएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै कांग्रसले अवरोध कायम राख्यो ।
अर्काेतिर सभामुख कृष्णबहादुर महरा पेलेरै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने प्रयासमा छन् । जसका कारण संसदमा घम्साघम्सीको अवस्था सिर्जना भयो ।
केपी वली नेतृत्वको सरकार र पदीय लालचमा अड्को हाली रहने काँग्रेस लगायतका दलहरुको बेतुक हर्कतका कारण जनताले बर्बादी बेहोरिरहनु परेको राम्रो संग अनुभूति भैरहेको छ । यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधिनता सबै भन्दा जटिल बिषय बनेको छ । हाम्रो राष्ट्रियता माथि गम्भीर आंच आउनेगरी दिल्लीले संसद चलाई रहेको कुरा जनताले राम्रो संग महसुस गरेका छन् ।
यहि बेला देशको सिमा भारतीयहरुले दिनप्रतिदिन मिचेर हाम्रो भुमि हराई रहदा, हराएको सीमाको बारे बोल्न सक्ने आँट संसदमा बेतालमा उफ्रिने त्यो गगन थापालाई पनि आएन । जो संसदमा ४ हात उफ्री-उफ्री औला ठड्याएर जुँगाको लागि ब्रुकुसी मार्छन ।
यदि गगन थापा संग हिम्मत छ भने सीमामा काँडेतार लगाउने अभियान चलाउने हिम्मत गरोस, सारा देशबासीले समर्थन गर्नेछन । होइन भने देशको सम्पतिलाई कुम्ल्याउने बिचौलियाको पक्षमा कुर्लेर माखो सम्म मर्दैन ।
कम्युनिष्ट सरकार र उनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु त बल्लतल्ल पाएको सरकारमा बसी जनताको ढुकुटी कसरि लुटेर खाने भन्ने सेटिंग मिलाउन बार्गेनिङमा व्यस्त छन् । उनीहरुको काम सिमा मिचिएको बारे बोल्नु होइन, बरु मन्त्रि र उनको सचिवालय संग बिचौलिया, चम्चे बनेर लुट्ने सेटिंगमा व्यस्त हुनु हो ।
उनीहरु संग फुर्सद पनि छैन । देशका धनाढ्य ब्यापारी ठेकेदारहरु संग साँठगाँठ गरि योजना डाइभर्ट गर्दै कसरि अकुत सम्पति कमाउन सकिन्छ भन्ने तिर दैनिकी बितेको छ ।
विप्लवले यो मुद्दा नछोड्नु
विप्लवले एकीकृत क्रान्ति गर्ने नै हो भने यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु निरन्तर बढाई रहनु पर्छ । आजको क्रान्तिको कार्यभारलाई पुरा गर्न नयाँ बिधि र नयाँ शैलीको प्रयोग गर्न आबस्यक छ ।
प्रचण्डले लड्न सिकाएको जस्तो विधि र शैलीमा आजको परिबेशमा असम्भव छ । नागरिकका वास्तविक मुद्दाहरुमाथि न्याय दिन सक्ने सामर्थ्य लिएर क्रान्ति गर्न आबस्यक छ ।
सिमा मिचिएको मुद्दा देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको मुद्दा हो । दोस्रो ठुलो मुद्दा भनेको जनताको ढुकुटीमाथि भ्रस्टाचारीहरुले लुटिरहने बिषय हो । दलाली र बिचौलिया संयन्त्रले देशलाई बर्बादी बनाइ रहेको बिषय हो ।
तर विप्लव नेकपाले यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता बोकेको अभियान निरन्तर जारि नराखे बिश्वास माथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यस्ता अभियान निरन्तर जारि राखोस भन्ने जनताको चाहाना छ, र संसदीय ब्यबस्था देखि अजिव बनेका जनताले राम्रो संग साथ् दिने निश्चित छ । यो अभियानबाट पछी हटे जनताको लागि घात हुनेछ ।